Sida loo Gadzhiyev oo ah drive Windows adag la software Gadzhiyev drive adag
> Resource > Hard Drive > Sida loo Gadzhiyev Hard Drive la Hard Drive Gadzhiyev Software in Windows 8/7 / Vista / XP
Maxaad u baahan tahay inaad Gadzhiyev drive adag?
Inta badan dadka waa in la kulmeen si loo soo dajiyo oo dhan barnaamijyo isku mid ka mid computer in kale, gaar ahaan mid ka mid waa guriga oo kale waa xafiiska. Waa wax fiican in shaqada iyo meelaha cidlada ah waqti daalin. Sidaas aan ku baaqaya in software Gadzhiyev drive adag wakhtigaas. More, taas copier drive adag noqon doonaa qalab fiican ayey noo tahay inaan dib ilaa xogta noo muhiim ah in haddii khasaare.
Tani waa sababta Wondershare WinSuite 2012 soo baxa. Waxay kaa caawin karaan in ay Gadzhiyev Vista drive adag iyo Windows drive adag, nuqul ka disk in drive adag ama nuqul drive ay adag tahay in qalabka dibadda oo aan khasaaraha xog kasta. Waxa ay taageertaa dhammaan noocyada warbaahinta kaydinta iyo dhammaan versions Windows. Waxaa intaa dheer, Wondershare WinSuite waa la jaan qaada dambeeyay Windows 8.
Hadda, raac tallaabooyinka hoose si aad samaysaan waxa aad u baahan tahay.
3 tallaabooyin ay ku Gadzhiyev drive adag ama disk dibadda
Tani nuqul drive adag kuu ogolaanayaa inaad Gadzhiyev disk dhan ah, ama xijaab ka disk ah. Haddii aad rabto in aad Gadzhiyev disk oo dhan, guji "Disk Dhan Gadzhiyev", haddii ay xijaab, ku dhacay "Gadzhiyev oo ah Barzakh, A".
Step1. Dooro il disk ah
Haddii aad rabto in aad nuqul ka wadid aad u adag tahay in qalab dibadda, furaysto waa in si aad u computer marka hore. Markaas riix "Disk Dhan Gadzhiyev", oo waxaad ka heli doontaa disk la xiriira your computer soo bandhigay. Dooro disk in aad doonaysid in aad nuqul ka xog ka oo ku dhacay "Next".
Step2. Dooro disk meel
Markaas baad u socotaa in ay doortaan disk meel halkan. Ka hor inta aan sidaa yeelno, hubi in awoodda disk waa in ay ka badan drive adag oo aad nuqul doonaa xogta laga, ama aad Gadzhiyev oo la diidi doonaa sabab u tahay awood ka baxsan. Markaasuu u tag tallaabada xigta si ay u bilaabaan Gadzhiyev oo ah.
Step3. Ku bilow cloning drive adag
Waxaad tahay tallaabo la soo dhaafay hadda. Guji "Next" si ay u bilaabaan dayanayaan hadda drive adag. Markaas bar habka aad ku tusi doonaa markii ugu dhamaatay iyo hartay. Marka Gadzhiyev oo lagu sameeyey, ku dhacay "OK" dhammayn aad Gadzhiyev disk.
OK. Waxaad si guul gjærceler wadid aad u adag. Oo waa inaad si computer kale ku wareejin karaa xogta, ama kaliya waxaan iyaga ku badbaadin u gurmad. Si Gadzhiyev xijaab arrintan WinSuite 2012 , waxaad qaadi kartaa talaabooyin la mid ah sida Gadzhiyev drive adag, dooro xijaab il> dooro xijaab meel> bilaabaan inay Gadzhiyev. Simple sida la mid ah, wax aad socda Windows 8, Windows 7, Vista ama XP!
Jidka Best in Gadzhiyev OS si weyn Hard Drive